Global Aawaj | आज बजेट पास गर्ने तयारीमा सत्तापक्ष, सदनमा के गर्ला एमाले ? आज बजेट पास गर्ने तयारीमा सत्तापक्ष, सदनमा के गर्ला एमाले ?
आज बजेट पास गर्ने तयारीमा सत्तापक्ष, सदनमा के गर्ला एमाले ?
२९ भाद्र २०७८ 9:31 am
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको जारी नवाैँ अधिवेशनकाे बैठक आज बस्दैछ । आजकाे बैठकमा बजेटकाे प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्ने सरकारी पक्षकाे तयारी छ भने त्यसलाई जसरी पनि राेक्ने रणनीतिमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) छ ।
सरकारले गत शुक्रबार मात्र प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत नयाँ बजेट ल्याएकाे थियाे । एमालेका सांसदको अवराेधका बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट ल्याएका थिए । त्यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पाैडेलले १५ जेठमा अध्यादेशमार्फत ल्याएकाे बजेट वर्तमान सरकारले काँटछाँट गरिदिएकाे छ ।
मंगलबारकाे सम्भावित कार्यसूचीमा अर्थमन्त्री शर्माले ‘विनियोजन विधेयक, २०७८ माथि विचार गरियोस्’ भनि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने उल्लेख छ । तर एमाले हरेक बैठकमा वेल घेर्दै आएकाे छ । आइतबारकाे संसद बैठक पनि एमालेकाे अवराेधका कारण अगाडि बढ्न सकेकाे थिएन ।
एमालेले पछिल्लो पटक दुई वटा सर्त तेर्स्याएको छ । एमालेले कारबाही गरेका १४ सांसदको सूचना टास गर्नुपर्ने वा सभामुख सापकोटाले मार्ग प्रसस्त गर्नुपर्ने । तर, कारबाही विषयको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले यसबारे संसदमा टिप्पणी गर्न नमिल्ने धारणा सभामुख सापकोटाको छ ।